Topnepalnews.com | यी कुरामा ध्यान दिनुस् मौसमी रोगबाट जोगिन ?
यी कुरामा ध्यान दिनुस् मौसमी रोगबाट जोगिन ?
Posted on: May 29, 2017 | views: 133
काठमाडौैं । गर्मी मौसममा हामी सावधान हुनु नै हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो । किनकी यस मौसममा सानो तिनो लापरवाहीले अनेक किसिमका रोगहरुले आक्रमण गर्न सकिन्छ । यस्तो मौसममा आपूmलाई स्वस्थ राख्न सानो तिनो कुरामा नै ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।
विहान वा रातिको समयमा तापक्रममा कमि हुने गर्छ भने दिनको समयमा तापक्रममा वेद्धि भएको हुन्छ । जस कारण गर्मी मौसममा अनेक किसिमका रोगहरुले आफ्नो घर बनाउन सक्छ । त्यसैले यो मौसममा हामी सँधै सजग भएर नै बस्नु पर्छ । यस मौसममा जाडोकोे प्रभाव कम हुन थाल्न भने तापक्रम पनि बढ्दै जान्छ ।
आयुर्वेदका अनुसार पाचनक्रियाको प्रबलताका कारण जाडो मौसममा हामी प्रायः हेब्भी भोजन खाने गर्छौ, जुन कफको रुपमा शरीरमा संञ्चित भईरहन्छ । त्यही गर्मी मौसममा सञ्चित कफ गर्मीको प्रभावले पघ्लिएर शरीरको विभिन्न प्रणालिहरुमा गएर विभिन्न प्रकारका विकारहरु उत्पन्न गरिदिन्छ । पाचन क्षमतामा कमी आउने गर्मी मौसममा तुलनात्मक रुपले हाम्रो पाचन क्षमता जाडो मौसमको तुलनामा कमजोर हुन्छ । त्यसैले यस मौसममा खाइने आहार राम्रो सँग पच्न पाउँदैन । परिणामास्वरुप यसले विषाक्त पदार्थ उत्पन्न हुन्छ, जुन गर्मी मौसममा प्राकृतिक रुपले बढेको कफ सँग मिसिएर रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई कम गरिदिन्छ ।- hamrodoctor